Kismaayo News » FIIDSOOH: Ingiriis Dhaladkiiyoow, halkeen kaa dhunkadaa !
FIIDSOOH: Ingiriis Dhaladkiiyoow, halkeen kaa dhunkadaa !
Kn: Markii lagu jirey halgankii xoriyad u doodka oo ay wada garamayeen tol Soomaali la yiraahdo iyo tol ingiriis la yiraahdo, nin gabyaa ah oo matalayay bulshadii gobolada waqooyi oo gabay mariyey wuxuu kusoo hooriyey “Ingiriis Dhaladkiiyoow, halkeen kaa dhunkadaa”.
Mudo nus qarni ka badan, midnimada qaranka waxa uu u afduubnaa kalmadaasi iyada ah iyo saameynta Ingiriiska, iyo jacaylka waqooyi looga qabay, waxaynu xaaladu gaartay illaa heer dalkii labbo loo kala jabiyo.
Maanta meeriska gabay ee Hargeysa yaala wuxuu yahay “Ingiriis Najiskiiyoow, halkeen kaa nabar dhawaa”, taasi waxaa ugu wacan labbo sababood, tan koowaad oo ah in labaatan sano kadib isku haleyntii aqoonsi ee Ingiriiska Somaliland ka qabtay oo laga quustey.
Sababta labaad ee ugu weyn ayaa ah digniintii dhawaan kasoo yeertey Ingiriiska ee ahayd halis kasoo fool leh Somaliland kadib markii la heley xogo sirdoon ah.
Somaliland waxa ay fileysey in dambi kasta oo ay geystaan in Ingiriiska uu xabadka u garaacan doono, islamarkaasina difaaci doono.
Balse taasi ma dhicin, hal hadal oo Ingiriiska kasoo baxay ayaa dhulka la gashay rajadii Somaliland ee aqoonsi doonka.
Warar la helayo waxa ay sheegayaan in Ingiriiska uu heley cadeymo ah in hogaamiyaha Shabaabka Axmed Godane uu joogo Somaliland, islamarkaasina maamulka uu ka warhayo, una fududeeyo socdaaladiisa iyo hanti uu halkaasi ku leeyahay.
Cadaymaha Ingiriiska waxa ay xoojinayaan sheegashooyinkii Puntland ee ahaa in Somaliland ay martigaliso Alshabaab madaxdooda.
Haddii ay dhab tahay in Somaliland ay madaxda Alshabaab martigaliso, waxa ay tani turjumaad cad u noqoneysaa su’aalihii Soomaali badan isweydiin jirteen ee ahayd sababta qaraxyada Alshabaab aysan oga dhicin Somaliland.
Warar hoose oo la heley waxay sheegayaan in illaa 7 sargaal oo sarsare oo sirdoonka ingiriiska ka tirsan la xirxirey sababo la xiriira sirtan iyo cadaymahan fakaday.
Sidoo kale meel ka tirsan gobolka Bay buuro ku yaala waxaa lasoo wariyey in saraakiil ka tirsan Alshabaab ay isku rasaaseeyeen sababo la xiriira sirtan fakatay iyo kala shaki dhexdooda ah.
Wadahadalada Somaliland iyo dowladda Federaalka oo ka dhacaya London sanadkani ayaanan la ogeyn saameyn ay arrintani ku yeelan doonto, waxaanse xaqiijin karnaa in Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la sheegey in uu siweyn ugu lug lahaa baaritaanka helitaanka cadaymaha xiriirka Somaliland iyo Alshabaab uu wadahadalada xubin ka yahay oo uu ka socdo dhanka Ingiriiska, lagana yaabo wadahadalada kadib in safiirka Ingiriiska uu u noqdo Soomaaliya, taasi oo abaalmarin ahaan u qaadanayo.